नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : तपाईंले पनि अमेरिकी डिभी भर्नु भएको थियो ? भरेको भए परे नपरेको नतिजा यहाँ हेर्नुहोस
तपाईंले पनि अमेरिकी डिभी भर्नु भएको थियो ? भरेको भए परे नपरेको नतिजा यहाँ हेर्नुहोस
संसार भर बाट अमेरिकाले प्रत्येक बर्ष ५५ हजारलाई DV Lottery Visa अन्तर्गत अमेरिका भित्र्याउने गर्दछ । यसै क्रममा अमेरिकी डिभीको २०२३ को नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । सन् २०२३ का लागि गत अक्टोबरमा आवेदन दिएकाहरुको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । https://dvprogram.state.gov/ मा गएर आफ्नो कन्फरमेसन नम्बर, लास्ट नेम, जन्म मिति राखेर नतिजा हेर्न सकिने ब्यवस्था रहेको छ । कन्फरमेसन नम्बर बिर्सिएको भए फर्गेट कन्फरमेसन नम्बर मार्फत मागेको विवरण भरेर नम्बर लिन सकिने छ ।
अमेरिकी सरकारका कुनै पनि निकाय वा दूतावासले कसैलाई पनि डीभी परेको भनी इमेल नगर्ने भएकाले त्यस्ता भ्रमबाट बच्न पनि आग्रह छ । यो नतिजामा डीभी परेकाहरुलाई सन् २०२३ सेप्टेम्बर ३० भित्र अमेरिकी भिसा जारी गरिसक्ने नियम रहेको अमेरिकाले जनएको छ ।